La kulan bisadda jecel Neva Masquerade | Bisadaha Noti
Bisadda Neva masquerade Waa kalluumeysi leh muuqaal jilicsan oo macaan sida kan Siberia; runti, halyeeyadeenu waa kala duwanaanta midabka midkan. Waa xayawaan aad ubood badan, oo ku habboon dhammaan noocyada qoysaska raadinaya saaxiib deggan oo si joogto ah u cadayda.
Gudaha Noti Gatos waxaan kuu sheegeynaa maxay yihiin astaamaha dhogorta quruxda badan -oo weligood sifiican looma oran- iyo sida loo daryeelo sidaa darteed aad baan u faraxsanahay.
1 Asalka iyo taariikhda bisada Neva Masquerade
4 Waa maxay daryeelka Neva Masquerade u baahan yahay?
5 Bisadda Neva Masquerade ma soo saarta xasaasiyad?
6 Waa imisa qiimaha bisada Neva Masquerade?
7 Neva Masquerade sawiro bisad ah
Asalka iyo taariikhda bisada Neva Masquerade
Bisadda quruxda badan ee Neva Masquerade waa bisad kaynta u dhalatay gobollada wabiga Neva, ee Ruushka. Waa nooc caan ku ah dalkeeda, inkasta oo adduunka intiisa kale ay ku kasbato kuwa raacsan si xawli ah. Waana taas, yaa diidi kara indhahaas jilicsan?
Waxa kaliya ee ay ku kala duwan yihiin Sibiriyanka waa midabka jaakaddiisa, oo ah midab midab leh, oo leh dhegaha, sanka, dabo iyo lugaha oo midabkoodu ka madowyahay jirka intiisa kale.
Miisaankeedu wuxuu u dhexeeyaa 4 ilaa 9kg, Neva Masquerade waa bisad yar oo dhexdhexaad ah. Jidhkiisu waa muruq, adag yahay, waxaana ku ilaaliya lakab cufan oo timo nus-dheer ah. Madaxa waa saddex xagal, leh dhago kacsan iyo indho buluug ah.
Dabada ayaa dheer, qiyaasteedu waa isku mid bartamaha jirkiisa. Lugaheeda waa gaaban yihiin laakiin adag yihiin, oo loo sameeyay inay awoodaan inay safraan masaafo dheer haddii loo baahdo.
Waxay leedahay rajo cimriyeed 20-23 sano.
Waa bisad aad u jecel oo bulsheed inuu si layaableh ugu noolaan karo guri ay caruur leeyihiin. Waa aad u degganIn kasta oo aad u baahan tahay jimicsi maalin kasta si aad u gubto tamarta aad haysato.
Waa maxay daryeelka Neva Masquerade u baahan yahay?
Waxaad u baahan doontaa cunto tayo sare leh oo hodan ku ah borotiinka xayawaanka (ugu yaraan 70%). Waa lagama maarmaan in laga fogaado bixinta quudinta ay ku jiraan firileyda iyo / ama wax soo saarka maadaama ay sababi karaan xasaasiyad, maadaama aysan heysan enzymyo lagama maarmaan u ah inay ka faa'iideystaan.
Cunto siiyaha waxaa lagula talinayaa inuu noqdo 24 saacadood oo buuxa. Bisadda Neva Masquerade wax yar ayey cuntaa maalintii dhowr jeer, sidaa darteed waxaa ugu wanaagsan haddii uu cunno ku haysto qashinkiisa bilaashka ah. Intaas waxaa sii dheer, tani waxay u noqon doontaa mid raaxo leh qoyskaaga aadanaha, maxaa yeelay waxaad kaliya ka walwal doontaa inaad ku darto cunto subaxa iyo / ama galabtii haddii ay faaruq tahay.
sidoo kale, xayawaanku waa inuu lahaadaa biyo nadiif ah oo nadiif ah. Tani marwalba waa muhiim, laakiin xitaa kaba sii daran xagaaga marka heer kulka heerkiisu sareeyo.
Maalin kasta waa inaan ku cadeynaa kaar si looga hortago timaha inay isku dhafan yihiin. Waxaa kale oo muhiim ah inaan indhihiisa ku nadiifino waqti ka waqti iyadoo la adeegsanayo faashad nadiif ah oo lagu qoynayo faleebo chamomile ah.
Dhinaca kale, waa muhiim inaad saxarada ciidda ka saarto maalin kasta, oo aad si buuxda u nadiifiso usbuuciiba mar ama bishiiba mar taas oo ku xidhan nooca ciidda la isticmaalay. Dareenkan, waa inaad ogaataa in ciidda cufan, in kasta oo ay xoogaa qaali tahay, ay ka sii dheer tahay sidii caadiga ahayd; Xaqiiqdii, haddii aad kaliya la nooshahay hal bisad, waxaad u baahan kartaa oo keliya inaad nadiifiso sanduuqa qashinka bishiiba mar.
Maalin kasta waa inaad waqti siisaa inaad la ciyaartoAma xadhig, kubad ka samaysan aluminium aluminium ah, ama xayawaan cufan leh. Waxa kale oo lagugula talinayaa in loo daayo inay u baxdo beerta ama barxadda haddii ay oodan yihiin iyo / ama ay leeyihiin nooc shabag ah oo ka hortagaya wax soo daadanaya si ay u socod u gaarto.
Ikhtiyaar kale ayaa ah in la baro inuu la socdo suumanka iyo xarkaha markii uu eey yahay, sida aan ku sharaxnay maqaalkan. Laakiin waxaa kaliya oo xiiso leh in banaanka loo soo baxo haddii aagga aad ku nooshahay ay deggan tahay oo aysan jirin wax gaadiid ah. Tusaale ahaan, magaalo gudaheeda waa inaan laga bixin, maxaa yeelay xayawaanku wuxuu dareemayaa culeys iyo cabsi badan.
Ahaanshaha nooc daahir ah, taas oo ah, in aysan faragalin bina aadamka, waxay ku jirtaa caafimaad aad u wanaagsan. Mararka qaarkood way ku dhici kartaa jirro, hargab ama ifilo, sida bisadaha kaleba. Haddii aad ka shakido inuu caafimaad qabo, u kaxee dhakhtarka xoolaha.
Bisadda Neva Masquerade ma soo saarta xasaasiyad?
Xaaladaha badankood (kudhowaad 83%) maya. Maaddaama ay tahay nooc ka mid ah Siberian-ka oo kani yahay bisad hypoallergenic ah, Neva Masquerade waa mid aad u xiiso badan kuwa qaba xasaasiyadda.
Waa imisa qiimaha bisada Neva Masquerade?
Bisadda Neva Masquerade waxay leedahay qiime celcelis ahaan ah 900 euros. Waxaan kugula talineynaa inaad ku soo iibsato bakhaarro xirfadle ah, maadaama sidan oo kale aad u hubin karto in dhogorta ay caafimaad tahay iyo inay heshay daryeelka lagama maarmaanka ah. Sidoo kale waa halka ay ku siin doonaan shahaadada dhalashada iyo halka ay kaga jawaabi karaan wixii su'aalo ah ee aad ka qabto waalidka eeyga.
Neva Masquerade sawiro bisad ah
Ku raaxayso sawirradan cajiibka ah ee Neva Masquerade:
Sawir - Cat-breeds-encyclopedia.com
Sawir - Nobilpazzi.com
Wadada buuxda ee maqaalka: Bisadaha Noti » Bisadaha » La kulan bisadda Neva Masquerade
Bisadeyda lama salaaxi doono, waayo?